MACLUUMAADKA TARANKA CHUG DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Chug Dog iyo Sawirro
Chihuahua / Pug ey isku dhafan oo isku dhafan
'Benji the Chug oo 3 sano jir ah oo sahaminaya Wales - waxaan Benji u helnay badbaadin 5-bilood jir ah. In kasta oo uu ku bilaabay noloshiisii ​​qallafsanayd, haddana weligii qalad ‘baw’ ah ma gelin! Waxaan ka baqeynaa xaqiiqda ah inuu yahay eeygii ugu horeeyay ee dhalinyaro ah oo aan yeelanay oo aan waligiis gurigiisa wasakheyn. Runtii waxay muujineysaa xaqiiqda in Chugs runtii yihiin nooc ka mid ah eeyga kuwaas oo si gaar ah u doonaya inay ka farxiyaan. Benji waa nooc aad u xasaasi ah oo jecel wada noolaanshaha iyo nabada guriga . Wuxuu doonayaa inuu nala joogo fursad kasta, laakiin sidoo kale wuxuu si weyn uga faa'iideystay saaxiibkiis, Bella (a Chihuahua x Brussels Griffon ). Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyo kale . In kasta oo uu yar yahay iyo lugaha gaagaaban, haddana wuxuu aad u jecel yahay inuu ku ordo oo wax ka baadho socdo Baaskiilkuna wuxuu maraa baadiyaha. '
Buuggu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Baabuur . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Chug
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Chug
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naadiga = Chug
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Xirmooyinka
'Kani waa 1 jirkeena Chug, Miki Lee. Kaliya waanu korsanay iyaduna waa mid qaali ah oo madax adag. Qof walba wuu jecel yahay. Laakiin ma jecla sawirkeeda in la qaado. '
Loki the Chug oo 7 jir ah— Waxaan badbaadinay Loki markii uu jiray 18 sano. Wuxuu leeyahay shakhsiyad shakhsiyadeed oo Puggish ah. Waxaan ku kaftameynaa inuu dhowaan xoog ku bartay ciidanka. Wuu eegi karaa sagxadda dhulka oo cuntada ayaa si yaab leh uga soo boodaya miiska meesha uu fiirinayo.
Basbaaska buniga ah ee leh Chug madow da'da 1 sano jir ah— 'Basbaasku waa gacaltooyo dhammeystiran oo xanjo leh. Waxay jeceshahay inay dhuuqdo oo ay saaxiibtinimo iyo kalgacal leedahay. Way ku weyn tahay carruurta yar yar weligoodna dagaal kuma qaado iyaga. Laakiin at the park eey iyadu way madax bannaan tahay oo way isweydiinaysaa sida ay iyadu meesha u leedahay. Dhogorteeda ayaa jilicsan wax badana ma daadinayso mana caddayso, laakiin waxay leedahay ilko soo booday. Iyadu waa 10 rodol oo jacayl ah waana ku faraxsanahay inaan iyada ku haysanno qoyskeenna. '
Taangiga eeyga isku dhafka ah ee Chihuahua / Pug (Chug)
'Kani waa Chug Cletus-keena' bubbie-keena. ' Waa 2 jir ku jira sawirkan. Aabihiis waa faw Pug iyo hooyadiis, kareem Chihuahua. Runtii waa qof ciyaar jecel oo jecel inuu sariirta kula fadhiisto oo uu TV-ga ka daawado !! Waxaan siinay orso caajis ah markii ugu horeysay ee aan guriga keennay walina wuu la seexdaa habeen walba isagoo saran. Cletus wuxuu jecel yahay xeebta. Wuxuu gabi ahaanba jecel yahay inuu ku ordo oo ku ciyaaro (oo uu ku qodo) ciidda. Wuxuu cabirkiisu yahay Pug, qiyaastii 20 rodol. Runtii waa saaxiibtinimo oo wuu jecel yahay carruurta. Waxaan leenahay bisado iyo eey gurigeenna waana la wadaagayaa qof walba. Cletus runti waa caqli badan-waxaan barnay xeelado qaarkood wuuna jecelyahay inuu u sameeyo qofkasta oo daawan doona (oo daaweyn siin doona, dabcan!). Runtii waan ku faraxsanahay inaan Cletus ku haysano qoyskeena !! '
Hudson oo ah cunug yar oo Chug ah oo 3 bilood jir ah waa isku dhafka Pug fawn iyo Chihuahua oo casaan-guduudan ah.
LuLu isku darka Chihuahua / Pug (Chug) qiyaastii 3 sano
Lucy isku dhafka Chihuahua / Pug (Chug)
Scooby the Pughuahua aka Chug (Pug / Chihuahua mix) markuu jiray 2 sano — Scooby jirkiisa wuxuu u qaab eg yahay Chihuahua oo leh foodda Pug.
Mugzie the Chug markuu jiray 1 sano— 'Hooyadiis waxay ahayd Pug madow aabihiisna wuxuu ahaa madow iyo caddaan dheer oo Chihuahua ah.'
Eeg tusaalooyin badan oo Chug ah
Sawirada Chug 1
sanka retriever sanka oo noqda casaan
3/4 Pyrenees weyn 1/4 adhijirka anatolia
beerka flat puppy puppy puppy puppy
sida weyn samayn huskies Alaska u hesho